Summer - isikhathi ukuzijabulisa, sihambahamba eduze olunesihlabathi, ukuvakashela izindawo zokudlela, amathilomu, amaqembu, futhi namanye wonke umsebenzi ofanayo. Abaklami ukunikela entsha izingubo onobuhle imibala kanye izitayela ezahlukene.
omunye umbala ingubo
Kungakhathaliseki ukuthi ongaziwa kungase kuzwakale, kodwa imfashini kakhulu umbala ehlobo omnyama. Ngenxa imiva yayo futhi kungenzeka izixazululo wesitayela ezingase zithathwe ngosizo lokhu ingubo fashion omnyama iwine lanamuhla 'ezishisayo' yesikhulumi ukujula. Kodwa fashionista kumele wazi ukuthi ingubo ngalolo umbala kumele ifane impukane, futhi kulula ukuba lelisu ngosizo izesekeli elikhanyayo - ngamaketanga, scarves, namasongo nabanye.
Black isinyathelo izungezwe kwasehlobo ezinemibala egqamile: bright blue, umbala a Lilac wequbula, onsomi futhi bonke shades of white (kodwa ikakhulukazi kipelno ezimhlophe). ingubo ujabule futhi umxhwele kakhulu uyobheka orange ezidliwayo. Uma ungafuni ukuba uhlanganise upende kanye linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso amaphethini noma efekethisiwe, ingubo eyodwa umbala Uyokwamukelwa kakhulu, ikakhulukazi njengoba ezikhethiwe is kakhulu lula.
Bathi fashion emuva, ngokuletha ukhohlwe okuthile ubudala engavamile. Futhi lokhu ehlobo isibe efekethisiwe ethandwa kakhulu, eyenziwe noma iyiphi inqubo eyaziwa. Njalo fashionista kungayiqabula ngubo, ukufekethisa ngisho iphethini kakhulu elula "isiphambano" ku umphetho kanye sleeves dress.
Imifekethiso uyobheka izingubo ezinkulu futhi kusihlwa, yebo, uma nje ukuthi umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa kakhulu nenhle. Lokhu kuzodinga needlewoman, intambo igolide noma ezacile lace padded. Kulokhu, akekho ongalokotha ucabanga ukuthi ingubo imfashini ngendwangu efekethisiwe sebenzisa be dumile nge ogogo bethu.
Amakhasi omagazini abaningi, amafasitela ezitolo Sekuyisikhathi eside emelelwa umfuziselo izicathulo wathungela okuzokwenziwa kuhlanganiswe kahle ingubo wathungela. Ikakhulukazi imfashini kule sizini uzokhokha - grid. Abaklami baye basungula imfashini izitayela izingubo zasehlobo 2011 ngenxa donuts: zonke "nezindaba" embozwe izicubu obukhulu. Uma kugridi akuvumelekile kuwe, khona-ke ukuthenga ingubo nge Ukufakwa wathungela-elementi.
Le sizini beyikhuluma kunoma ngamajamo weJiyomethri. uphizi ezinkulu nezincane, engeli, intersecting imigqa - ikakhulukazi imfashini kule sizini. Kodwa kule dress izesekeli enkulu nalolo.
Flowers for izinhlobo ezahlukene iyatholakala ku ehlobo fashion ingubo yesimanje isitayela abalandeli. Uma ufuna ukuletha ekuphileni umfanekiso ukukhanya kanye Airy inganekwane, lapho ngokuqinisekile kudingeka sigqoke rose obucayi, daisy noma abanonya iminduze ngomusa. Kodwa izimbali akufanele kube esikhanya kakhulu - sebenzisa imibala iyashintsha iyaphupha ibe. Khetha ingubo salokhu ibhande ku okhalweni, kule sizini kubalulekile ikakhulukazi isikhumba esingokwemvelo ithoni.
impahla Exquisite wenzela enye intokazi. fudlana yokukhanya kusihlwa igqoka nge corset 2011 akabashiyi yimuphi umuntu ngaphandle ukunakwa. Lokhu kwaziswa akaphelelwa kwayo, kulapho ukuthi uphelele hot sezulu ehlobo.
Qaphela lapho ekhetha ingubo yobuhlanga njengoba ezinemibala egqamile Oriental ayifanele wonke umuntu. Kodwa lezi izingubo imfashini babe zako - bangakwazi igqoke nge amateki kanye izithende, futhi tankettes ...
igqoka esifingqiwe nokuqala
izindwangu Khanyisa, ezinemibala egqamile, ezihlukahlukene izitayela imfashini izingubo ehlobo 2011, ezisukela igqoka esifushane, namabhantshi ziphethe emfushane shift ingubo, kuyoba yinto umphelelisi enhle kakhulu ikhabethe ehlobo. Emgodleni ingubo kufanele usunayo i imfanelo esiyisibopho ekamelweni lakho.
Sarafan, nenhle kusihlwa igqoka ekukhanyeni yokusakaza izindwangu ka ezihlukile ngisho okungafani kwenzeka ethandwa kule sizini. Ukuze abanikazi ngokudayisa zinhle izingubo enhle nge corset 2011, bona ukugcizelela emgqeni libanjwe futhi wenze waistline izacile, lezi izingubo zihlale bafanelwe ukunakwa abobulili obuhlukile.
Ulwandle, ilanga, lolwandle
Nautical timu imfashini ngaso sonke isikhathi. Inhlanganisela obomvu, okumhlophe nokuluhlaza uyakwazi ukudala izithombe eliyingqayizivele ukuthi nokukhetha efanele izesekeli kungaba nsuku zonke futhi dress kusihlwa.
Dress-vest uma ngokukhethekile wadala for ukungcebeleka ogwini olunesihlabathi. Ungakhohlwa ukukhanyisa isikhwama phezu kwehlombe lakhe futhi isigqoko esinompheme omkhulu.
izingubo besimanje akufanele kwenziwe nje stylish, kodwa futhi ukhululekile. Yiba zokudala futhi udale umfanekiso esiyingqayizivele nge izinqumo engavamile yesitayela.
Uhlamvu lwemali eqolo-USSR noma izibonelo ukutshalwa baphumelele kwakudala